Madasha Xisbiyada Qaran oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho | XORRIYA NEWS
Home Siyaasadda Madasha Xisbiyada Qaran oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho
Madasha Xisbiyada Qaran oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho
Shirkada ayaa diirada lagu saaray xaaladda guud ee uu dalka marayo iyo arrimaha doorashada.
Madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ahna hoggaanka Madasha Xisbiyada Qaran oo caawa suxufiyiinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda guud ee uu dalka marayo iyo sida ay dowladda u wajaheyso qabashada doorashada madaxtinimo ee wadanka ku soo wajahan.
Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii kursiga ku wareejiyay madaxweyne Farmaajo, ayaa walaac ka muujiyo in xiligan oo waqtigu gabaabsiga yahay ay madaxda Villa Soomaaliya ku murmayaan in dalkan doorasho ka dhici karto iyo inkale.
” Doorasho ma dhacaysaa in xilligaan laga murmo waa nasiib daradda ay badeen shacabka Soomaaliyeed Villa Somalia masuuliyiinteeda” ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo isagu madax u ah madasha ay ku midoobeen inta badan xisbiyada mucaaradka ku ah dowladda, ayaa hadalkiisa xoogga ku saaray fara gelinta gudaha ah ee dowladda Itoobiya ay ku heyso gudaha dalkan.
Wuxuu kaloo soo hadal qaaday dhibaatooyinka ay dalka iyo dadka u geystaan Ciidamada aan AMISOM ka tirsaneyn ee ka socda xukuumada Adis-Ababa, wuxuuna dhibaatooyinka ay geystaan dusha uga riday madaxda sare ee dalkan waqtigan maamusha.
“Waxaan la socnaa ciidamo aan ka tirsaneyn AMISOM ay Dowladaha deriska leeyihiin oo marwalba soo gala dalka ama jooga, geystana dembiyo, arintaas waa arin ka soo horjeeda heshiiska ay ku joogaan ciidamada AMISOM, keeneysana kalsooni darro in lagu soo dhex daro ciidamo aan ka tirssaneyn oo aan sharci ku joogin ciidamada AMISOM” ayuu yiri Shariif.
Waxa uu talo ahaan u soo jeediyay in sharciga la horgeeyo ciidamadan, si loogala xisaab tamo dhibaatooyinkii ay geysteen ” waxaan ugu baaqeynaa ciidamadaas in si deg deg ah looga saaro dalka, falalka ay geysteena lagu xisaabiyo oo sharciga la hor keeno.”
Madaxweynayaashi hore ayaa soo dhoweeyay baaqii ka soo baxay Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare oo ahaa in qabashada doorashooyinka laga wada tashto.
Si kastaba, kulanka caawa ay Caasimadda ku qabteen Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed ayaa ka danbeeyay kadib kulan ay galabta la yeesheen gudoomiyaha golaha Shacabka iyo kuxigeenkiisa, kulankaas ayaa ku soo idlaaday fashil, maadaama madaxdii hore ee dalka ay iska diideen hadafkii kulankaa ee ahaa in caawa ay Villa Soomaaliya madaxdii sare ugu tagaan madaxweyne Farmaajo, si loo wada hadlo.